DEBIAN 10 မှထောက်ပံ့မထားသောအခြားရွေးချယ်စရာ Desktop Environments | Linux မှ
DEBIAN 10 မှတရားဝင်မပံ့ပိုးနိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးသားသိသည်အတိုင်း Debian 10 meta- ဖြန့်ဖြူး, စုစုပေါင်းနှင့်လက်ရှိအစုံ၏ရှေးအကျဆုံးအစိုင်အခဲများနှင့်တည်ငြိမ်သောတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များ ရှိပြီးသား, ဒါကြောင့်ဇာတိလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ပီပီထောက်ခံပါတယ် Desktop Environments (DE) လူသိများသည်။
အဲဒါကိုသတိရပါ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အသုံးပြုသူတိုင်းကိုကမ်းလှမ်းရန်လိုအပ်သည့်ဆော့ဝဲလ်သည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည် operating systemအမြင်အာရုံ၊ ဖော်ရွေ။ အဆင်ပြေသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည် graphical user interface (GUI) ပေးချင်တယ် လွယ်ကူသောဆက်သွယ်မှုနှင့် configurationထိုကဲ့သို့သော toolbars နှင့် applications များအကြားပေါင်းစည်းမှုကဲ့သို့သောများစွာသောအခြားအကြား, ဆွဲချခြင်းနှင့် drop ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတူ။
လက်ရှိ၏အမှု၌ DEBIAN GNU / Linux metadistribution၎င်း၏လတ်တလော၌တည်၏ ဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 10, ကုဒ်နာမည် busterအောက်ပါတို့၏တပ်ဆင်အသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်ထောက်ခံသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်: GNOME, KDE Plasma, Xfce, သစ်ကြမ်းပိုး, အိမ်ထောင်ဖက်, LXDE y LXQT.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြထားတဲ့အတိုင်း, ချက်ချင်းဒီအပိုဒ်အထက်ပုံကိုလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Tasksel (Task Selector (သို့) Task Selector)။ ဘယ်တစ်ခုကသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ system ကို configure ချင်သောအသုံးပြုသူများအတွက်ရိုးရှင်းသော interface ကိုထောက်ပံ့ပေးသော package တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်ကိုကာလအတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည် တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ်မည်သည့်အချိန်တွင်, အချို့သောစတင် parameters များကိုသုံးပြီးသို့မဟုတ်မ။
1 Alternative Desktop Environments
အဆိုပါအကြား Alternative Desktop Environments တရားဝင်ကထောက်ခံသည်မဟုတ် ဒေဗန် ၁၀, IE, Tasksel မှပုံမှန်အားဖြင့်စီမံခြင်းမဟုတ်ပါအောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
Deepin Desktop Environment (သို့) DDE တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် မွေးကင်းစသို့မဟုတ်တီထွင်ဆန်းသစ်။ အလုပ်လုပ်နိုင်သောတရုတ် Distro ၏မူလဖြစ်ရန်ဖန်တီးခဲ့သည် Deepin။ ၎င်းကိုစာကြည့်တိုက်ဖြင့်အစပြုခဲ့သည် GTK၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပူဇော်ခွင့်ပြုခဲ့သော GNOME shell ကို အဲ့ဒီအကြောင်း။ ထိုအခါငါစာကြည့်တိုက်ထည့်သွင်း Qt5 အစား rendering ၏ HTML5.
ယခုလက်ရှိတွင်၎င်းကိုပြန်လည်ရေးသည် DTK (Deepin Tool Kit) ယေဘုယျအားဖြင့်စနစ်နှင့်အတူ interface ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အပြန်အလှန်သည်။ ထို့အပြင် Dde စနစ်ချိန်ညှိချက်များ၊ အသွင်အပြင်၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်ရွေးချယ်စရာများကိုပေါင်းစပ်ပေးသော configuration center တစ်ခုပါ ၀ င်သည် ဟာ GRUB စနစ်အထူး။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဒေဗန် ၁၀ဗားရှင်းဖြန့်ချိခဲ့သည်အခါ Deepin 20ဒီအပေါ်အခြေခံလိမ့်မည်။ အကြောင်းပိုမိုသိရန်ကဆိုသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် သင်သည်သူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Dde.
Pantheon တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် Distro ဟုခေါ်သောအမြန်၊ လွတ်လပ်၍ လုံခြုံသောမြောက်အမေရိက၏ဇာတိသို့မဟုတ်ပုံသေဖြစ်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ မူလတန်း OS ကို။ ၎င်းကိုအလင်းနှင့် modular ဖြစ်ခြင်းဖြင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသားခဲ့သည် Vala နှင့်အတူနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာ GTK3.
အခြေခံသည် GNOME သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် shell ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါး။ အနည်းငယ်မျှသာရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအခြား application များနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာပေါင်းစပ်ထားသည် မူလတန်း OS ကို como ပျဉ် (အထိုင်) Epiphany (ဝဘ်ဘရောက်ဇာ), ကုတ်ခြစ်ရာ (ရိုးရိုးစာသားတည်းဖြတ်သူ) သို့မဟုတ် Birdie (Twitter client) ။ ဒါ့အပြင် window manager အဖြစ်သုံးပါ Galaအပေါ်အခြေခံပြီးသော ပြောတတ်.
၎င်းသည်တပ်ဆင်နိုင်သည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဒေဗန် ၁၀၎င်း၏လက်ရှိဗားရှင်းကနေတည်ငြိမ်တဲ့လမ်းအတွက် ၅။X (Juno)နှင့်သဟဇာတ ဒေဗန် ၁၀ယခင်ဗားရှင်းကတည်းက 4.X (Loki) အပေါ်တည်ငြိမ် installable ဖြစ်ခဲ့သည် ဒေဗန် ၁၀။ အကြောင်းပိုမိုသိရန်ကဆိုသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် သင်သည်သူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Pantheon.
Budgie Desktop ကို တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် ဇာတိဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသော၊ လွတ်လပ်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူမှု၏မူလဖြစ်သည်။ Irish distro ခေါ်ပါ Solus။ ထို့အပြင်ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် ခေတ်မီ၊ ကြံ့ခိုင်မြန်၊ မြန်၊.
အစပိုင်းတွင်သူ၏အသွင်အပြင်သည်အလွန်ဆင်တူသည် GNOME2နှင့် / သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်ဖက်ကဒြပ်စင်ပေါင်းစပ်နိုင်ပေမယ့် ဝီစကီ y သစ်ကြမ်းပိုး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအပေါ်တည်ဆောက်ထားသည် GNOME3ဒါပေမယ့်ထံမှအချို့သောညွှန်ကြားချက်ကိုအသုံးပြု GNOME 2။ ဒီနေ့မှာတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။
လက်ရှိ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအပေါ်၎င်း၏အသွင်အပြင် Solus ၏ interface ကိုသတိပေးနေပါတယ် Windows ကို 10။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်အောက်ပါဘား၏စည်းကမ်းချက်များ၌သတိပေးချက်areaရိယာ၌ရှိသကဲ့သို့။ အသုံးပြုသူအချို့ကိုညွှန်ပြပါ Windows ကို သူတို့မောင်းတယ် GNU / Linux များသူတို့ကအရမ်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
၃ ယောက်အနက် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် မှတ်ချက်ပေး, ဒီပေါ်တွင် install လုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဒေဗန် ၁၀သူတို့ရဲ့ကြောင့်, packages များ (budgie-desktop, budgie- *) သူတို့ကအတူတူပင်၏မူလ repositories ၌ရှိကြ၏။ အကြောင်းပိုမိုသိရန်ကဆိုသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် သင်သည်သူတို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Budgie.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အကြောင်း «Entornos de Escritorios» တရားဝင်ကထောက်ခံသည်မဟုတ်အခြားနည်းလမ်း «DEBIAN 10», အချို့သည်လက်ရှိတွင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီးအခြားသူများမှာမူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းမကြာမီဖြစ်လာမည့်အရာတစ်ခုလုံးအတွက်ကြီးမားသောအကျိုးစီးပွားနှင့်အသုံး ၀ င်မှုရှိလိမ့်မည်။ «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » DEBIAN 10 မှပံ့ပိုးမှုမရှိသောအခြား Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ
အလက်ဇန်းဒါး Garcia က ဟုသူကပြောသည်
Alejandro Garcia သို့စာပြန်ပါ
Alejandro! ငါသူ့ကိုမသိခဲ့ပါ၊ မကြာမီသူ့ကိုဖော်ပြမည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ မှတ်ချက်နှင့်အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
AMPPS - GNU / Linux ရှိ Web Development Environment ၏ Softaculous
DOSBox: GNU / Linux တွင် DOS ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားကိုဘယ်လိုသုံးရမည်နည်း။